आजबाट आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन
कोभिड-१९ का कारण दुई महीनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान आज बिहानबाट सञ्चानलमा आएको छ।
आन्तरिक हवाई उडान १७ असारबाट सञ्चालन हुने
कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण बन्द गरिएको आन्तरिक हवाई उडान १७ असारबाट सञ्चालन हुने भएको छ।
आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय
कोभिड-१९ का कारण बन्द गरिएको आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
पर्यटक पर्खिरहेछ नेपालभित्रको अर्को ‘श्रीलंका’ चारैतिर पानीले घेरिएको देश हो, दक्षिण एशियाली मित्रराष्ट्र श्रीलंका। तर, नेपालभित्रै पनि अर्को ‘श्रीलंका’ छ–श्रीलंका टापु ।
गण्डकीमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य’ कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य’ कार्यक्रम ल्याएको छ।
आन्तरिक उडान खुलाउन वायुसेवा सञ्चालक संघको माग वायुसेवा सञ्चालक संघले आन्तरिक उडान खुलाउन माग गरेको छ।
१ असारबाट आन्तरिक उडान खोल्न वायुसेवा सञ्चालक संघको माग वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले १ असारबाट आन्तरिक हवाई उडान खोल्न माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ।
रवीन्द्र अधिकारीको नाम राख्न लागेको विमानस्थललाई ५ करोड संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुकेटार विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणको लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अन्नपूर्णमा पहिलो पाइला बेलायती जर्ज हन्ट र सर एडमण्ड हिलरी पनि मेरा साथी नै थिए। उनीहरूले भने- “हामीले तिब्बती मोहडाबाट पनि पटक–पटक कोसिस गर्‍यौं, अहिलेसम्म सकेनौं, अब एकपटक हाम्रा लागि छोडिदिनोस्।” त्यो आग्रहपछि ‘त्यसो भए यो पटक तपाईंहरूलाई मौका भयो, तपाईंहरूले नसके अर्कोपटक हामी चढ्छौँ’ भन्दै हामी अन्नपूर्णतिर लाग्यौं।
नेपाल आउने यात्रुले १० दिन होटल क्वारेन्टिन बस्नैपर्ने, यस्ता छन् मापदण्ड सरकारले १७ जेठमा नेपाली तथा विदेशी नागरिक नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड २०७८ जारी गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई भत्तासहित १० दिन भ्रमण बिदा सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।
२०२० मा २ लाख ३० हजार पर्यटक आगमन सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार ८५ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्।
धौलागिरी हिमालबाट संकलित फोहोर पुनर्प्रयोगका लागि हस्तान्तरण धौलागिरी हिमालबाट संकलन गरिएको फोहोर पुनर्प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ।
महामारीबीच सगरमाथा आरोहणमा आकर्षण, ३९४ आरोही प्रतीक्षामा
पर्यटन मुकेश पोखरेल
सगरमाथा आरोहण गर्न यस वर्ष अनुमति लिएका ३९४ आरोही आधार शिविर पुगिसकेका छन्। मौसम अनुकूल भए आउँदो मे महीनाको पहिलो सातादेखि आरोहणको क्रम शुरू हुनेछ।
पर्यटन बोर्डमा १३ वर्षपछि उपाध्यक्ष नियुक्त
नेपाल पर्यटन बोर्डमा रिक्त भएको १३ वर्षपछि उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको १८ फागनुको बैठकले पर्यटन व्यवसायी तथा बोर्ड सदस्य चन्द्रप्रसाद रिजाललाई बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
विदेशी पर्यटकले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्यटनका ३१ संस्थाको माग
कोभिड-१९ कारण थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
कहिले फर्किएला पर्यटन क्षेत्र लयमा? सरकारको उदासीनताले महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन सकेको छैन भने सामान्यदेखि दीर्घकालीन योजनाहरू पनि अलपत्र परेका छन्।
जाने होइन त मुन्धुम पदमार्ग ? किराँती समुदायको आध्यात्मिक भूमि अवलोकन गरिरहँदा आफ्नै जीवन-जगतबारे नौलो ज्ञान प्राप्त भएको आभास हुन्छ।
सगरमाथामा भारतीय नागरिककाे फर्जी आरोहण: आरोहण दलदेखि सम्पर्क अधिकृतसम्मलाई कारबाही भारतीय नागरिकद्वय नरेन्द्र यादव सिंह र सीमा रानीले सन् २०१६ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गरेको फर्जी विवरण बुझाएर लिएको पर्वतारोहण प्रमाणपत्र सरकारले रद्द गरिदिएको छ।
ऋणको व्याजमा छुट दिन होटल व्यवसायीको माग हाेटल व्यवसायी संघ नेपाल (हान) सम्बन्ध व्यवसायीले पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर ऋणकाे ब्याज छुटलगायका विभिन्न १५ बुँदे माग पेश गरेका छन्।
पर्यटक आगमनमा सरकारकै तगारो ! कोरोना महामारीपछि नेपाल आउन विदेशी पर्यटकलाई लगाइएको बन्देज पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि हटाइए पनि सरकारले आगमन बढाउन सहजीकरण नगरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्।
होटल कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक ५० प्रतिशतले कटौती, एक वर्षसम्म २ देखि ५ हजार पाउने कोरोना कहरका कारण पर्यटक आगमन नभएर ठप्प भएका होटल क्षेत्रका मजदुरकाे तलब ५० प्रतिशतले कटाैती भएकाे छ। कर्मचारी काममा नलगाएको अवस्थामा न्यूनतम रु.२ देखि अधिकतम रु.५ हजार मात्रै दिने गरी होटल संघ र मजदुर संघठनबीच सहमति भएको छ।
केटुमा नेपालीको कीर्तिमान: दुई आरोहीको याेजना यसरी भयाे सफल आठ हजार मिटरभन्दा माथिका १३ हिमाल हिउँदमा आरोहण भइसकेको थियो। पाकिस्तानको के टु मात्र आरोहण हुन बाँकी थियो। एक भेटमा निर्मल पुर्जा र मिङ्मा जी शेर्पाले बनाएको योजना सफल हुँदा नेपालीले विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमालमाथि कीर्तिमानी आरोहण गरे।
आन्तरिक पर्यटन पुनरूत्थान गर्न धम्पुस पीक आरोहण कोभिड-१९ महामारीले सुस्ताएको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटकमार्फत् प्रवर्द्धन तथा पुनरूत्थान गर्न धम्पुस पीक आरोहण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र नेपाल पर्वतारोहण संघको संयुक्त पहलमा दुई महिलासहित ६ जना नेपालीको टोलीले धम्पुस अरोहण गरेका हुन।
हिमाल आरोहणमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै, ४३ आरोहीले लिए आरोहण अनुमति काेरोना महामारीले ठप्प भएको पर्यटक आगमनका कारण रोकिएको हिमाल आरोहणमा यो वर्षको जाडो सिजनका लागि ९ टोलीका ४३ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले ७ हिमाल आरोहण गर्न ३६ पुरुष र ७ महिला गरी ४३ आरोहीलाई आरोहण अनुमति दिएको हो।
पर्यटन बोर्ड बल्ल संघीय संरचनामा, सातै प्रदेशमा पर्यटन कार्यालय स्थापना नेपाल पर्यटन बोर्डले सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेको छ। बोर्डले आइतबारबाट ती कार्यालयमा कर्मचारीसमेत खटाएको छ। प्रदेश कार्यालयमा प्रबन्धकसहित एक अधिकृतलाई खटाएको बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बताए।
पर्वतीय उडानमा यात्रुको आकर्षण, एकैदिन आठ उडान सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालको मनोरम दृश्वावलोकन गर्न पाउने भएपछि मुलुकको पर्वतीय उडानमा यात्रुको आकर्षण बढेको छ। निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध र यती एअरलाइन्सले हरेक शनिबार पर्वतीय उडान गर्दै आएका छन्। आज बुद्धका पाँच र यतीका तीन उडान भए।